Speed backs Howard's nomination - Rediff.com Sports
Rediff.com » Sports » Speed backs Howard's nomination for ICC president-elect
June 01, 2010 12:00 IST
Howard, a joint nominee of Australia and New Zealand, to succeed India's Sharad Pawar first as vice-president and then as president was opposed by Zimbabwe and South Africa and later Sri Lanka also joined the resistance.
"Sharad Pawar is a very sensible, experienced man who I think has now got a good grip of cricket administration and politics," Speed told the Australian.
"Their position now, as I understand it, is that Howard's not qualified because he's a politician and he's criticized Zimbabwe, so they bring politics back into it when it suits them," he added.
Speed said he finds the opposition of Zimbabwe and South Africa to Howard's nomination as outrageous. "I think the behaviour of Zimbabwe, and South Africa supporting them, has been outrageous," Speed said.
Tags: John Howard, ICC, Sharad Pawar, Zimbabwe, New Zealand